Carragher oo niyad jabiyay taageerayaasha Man United kaddib markii uu soo laabtay Ronaldo – Gool FM
(Manchester) 10 Sebt 2021. Halyeeyga Liverpool Jamie Carragher ayaa ka careysiiyay jamaahiirta Manchester United, kaddib markii uu ku soo laabtay xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo safka naadiga Red Devils.
36 jirkaan ayaa ku soo laabtay Manchester United xagaagan, kaddib markii uu saxiixay heshiis labo xilli ciyaareed ah, wuxuuna adduun dhan 15 million euros uga soo wareegay Juventus.
Halyeeyga kooxda Liverpool Jamie Carragher ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay:
“Ma aanan arkin ciyaartoy badan oo horey ugu soo ciyaaray Manchester United ee ku faraxsan saxiixa Cristiano Ronaldo, sidaas darteed waxay ii tahay daqiiqad weyn.”
“Waa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneyd abid, shaki la’aan, laakiin waxaan qabaa inuu saameyn xun ku yeelan karo Manchester United.”
Cristiano ayaa ka tagay kooxda Man United xagaagii 2009, si uu ugu biiro Real Madrid, iyada oo heshiiskiisa uu ku kacay xilligaas qiimo dhan 94 million euros, kaddib markii uu 6 sanadood qeyb ka aha safka Red Devils.
Xiddiga reer Portugal ayaa la filayaa inuu markii ugu horeysay ka soo muuqdo safka Red Devils kaddib soo laabashadiisa, kulanka bari oo Sabti ah ay kula ciyaari doonaan Newcastle United horyaalka Premier League.
“Barcelona waa riyada ciyaaryahan walba… tanina waa xaqiiqda codsigayga inaan baxo kaddib bixitaanka Messi” – Agüero